Gemology glossary - Akwụkwọ ọkọwa okwu nke gemstone
na usoro orthorhombic, monoclinic na triclinic enwere uzo ato kristal nke ogologo di iche. Ntughari okpukpu abụọ ga-eme n'ọtụtụ ntụziaka, mana a ga-enwe axis optic abụọ (ntụziaka nke otu ntụgharị) nke dị iche na nghazi na ụdị iche iche ọ bụla. mineral ndị dị na sistemụ ndị a bụ ihe akpọrọ biaxial. (Na usoro orthorhombic, ngwa ngwa optic nwere mmasị na 'c' (ụkpụrụ kwụ ọtọ axis), ebe na monoclinic na triclinic enweghi mmekọrịta ọ bụla na anyụike kristal.)
mmetụta ntụgharị uche sitere na oghere yiri nke fibrous ma ọ bụ (anya cat). Otu eriri nke ìhè na-egosi na akụkụ aka nri na ntụziaka nke inclusions na ọ kachasị mma ịhụ n'okpuru otu isi iyi ọkụ na nkume ndị egbutu en cabochon
(agba gị n'ụlọnga). Akụkụ nke molekul nke na-ahụ maka agba agba. Ọ dị dị ka ihe dị mkpa dị mkpa na ngwakọta kemịkal na nkume idiochromatic ma ọ bụ dị ka adịghị ọcha nke adịghị ọcha na nkume allochromatic
a visual nghọta nke mejuputara n'ime nke na-acha ọcha ìhè nwere ike iche (red, oroma, odo, green, acha anụnụ anụnụ, violet) nakwa dị ka sensashion nke-acha odo odo nke na-adịghị hụrụ na anyanwụ ụdịdị dị iche iche. A na-akọwa agba site na hue, saturation na ụda. Ahu aru nke gemstone na eweputa site na ìhè ya site na ya hu ya bu kwa nihi nnabata nke ufodu wavelength nke ìhè ana ahu anya. Agba nwekwara ike ịbụ site na mgbasa, nnyonye anya nke ìhè na ncha ọkụ
osisi-ma ọ bụ akpaetu-dị ka mgbape ndochi (ebe inclusions nke dị iche iche ihe onwunwe nwere ike fil a ezumike - a na-ígwè oxide.)
ịnapụ enyo luster na transluceny. (N'ihe banyere ngwaahịa iko a na-akpọ meta jed - bụ site na mmepe nke incipient crystallization)
dispersion bụ nkewa (na-agbasa) nke na-acha ọcha ìhè n'ime spektral agba site refraction (ekwe nke ìhè) dị ka ìhè na-agabiga abụọ uche ebupụta. Na ihe bara nnukwu uru a na-akpọkarị ya 'ọkụ'
anisotropic - mineral na-egosiputa ihe ngosi anya nke uzo (dika, okwute na tetragonal, hexagonal trigonal, orthorhombic, monoclinic and triclinic systems)
ekweghị ekwe bụ ike nke ịnweta nwere iguzogide ọkọ (abrasion). Hụ kwa ọkwa Moh
hue na-ezo aka na aha agba ya n'onwe ya: mmetụta uche dị ọcha nke uhie, oroma, odo, akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, acha anụnụ anụnụ, violet na ọdịiche ndị a. Hue na-ezo aka na mmetụta nke odo odo (n'etiti acha ọbara ọbara na violet), nke na-adịghị ahụ anya anyanwụ
nke a na - ahụkarị na - enweghị mmiri mmiri mmiri na - enweghị mmiri nke na - etolite na mollusk mgbe a na - eweghachi ya na mmiri mgbe ewepụsịrị ihe ọkụkụ nke mkpụrụ pel na - abụghị nke nucleated. Ihe ndi a agagh aghagha anya na pearis nkpuru mmiri nke na-adikariri obere. A na - akpọ `` keshi '' dị ọcha naanị n'ihi na ha anaghị eto site na ntọala artificial. Mgbe ụfọdụ, a na-akpọ ya 'pel' na-enweghị mkpụrụ iji mee ka ọdịiche dị iche na nke na-abụghị nke ntọala. Lee kwa nkume pel Biwa
Japan na-akpọ mkpụrụ pel 'keshi' (poppies). Mkpakọrịta a dị n'agbata obere obere mkpụrụ osisi poppy na obere pel dị ka obere
n'ozuzu okwu maka inyepu ìhè 'oyi' a na-ahụ anya site na ihe na-enweta ike zuru oke n'otu ụdị ma ọ bụ ọzọ. Fivekpụrụ ise a na - ahụ anya bụ: chemi-luminescence (nsonaazụ nke mgbanwe kemịkal), tribo-luminescence (nke esemokwu sitere na ya), thermo-luminescence (nke ewepụtara site na okpomọkụ), photo¬luminescence (nke ewepụtara site na anya ma ọ bụ adịghị ahụ anya nke ike dị elu / mkpụmkpụ wavelength) na cathodoluminescence (nsonaazụ site na mkpali na eriri elektrọn n'ime ụlọ agụụ)
otu metric carat = otu ụzọ n'ụzọ ise nke gram (0.20gr) ma ọ bụ 200 milligrams (mg). A metric carat bụ unit nke ịdị arọ maka ail gemstones na cultured ib. A na-egosipụta ibu ya na ebe ntụpọ abụọ na a na-akpọkarị ntụpọ a akara 'isi', yabụ, 1 metric carat = 100 points
tupu ẹdude inclusions: ndị nke dị tupu usu crystal malitere na-etolite ma na-etinye obi gị dum 'njikere mere' n'ime nke ikpeazụ (eg, siri ike ahụ na obere kristal. Ha na-agbasaghị na-irregularly strewn nile na-adịkarịghị metụtara usu crystal si Ọdịdị
a pseudomorph (ụdị ụgha) bụ ịnweta nke na-ewe ọdịdị (ọdịdị) nke ịnweta ọzọ (ma ọ bụ ihe ndị na-eme ihe) n'ihi ọkụ na / ma ọ bụ nrụgide ma ọ bụ usoro kemịkalụ, dịka, anya agụ (ntụgharị quartz nke crocidolite, mineral asbestos); osisi agate (a quartz nnọchi nke osisi)
ngosipụta bụ nloghachi site a n'elu (ma internai ma ọ bụ mpụga) nke ụfọdụ nke ìhè nke dara na na elu. Leekwa Iwu Snell
refraction bụ ngbanwe nke uzo nke ìhè na-ejegharị site na otu mgbasa ozi gaa na nke ọzọ nke njupụta anya dị iche iche (belụsọ mgbe ọ na-akụ elu nke mgbasa ozi abụọ ahụ na 90 Celsius). Ka ìhè na-esite na ụgụrụ gaa na nke na-ajụ oyi (ịmaatụ, site n’ikuku wee banye na okwute) ọ na-ehulata iru ala ka ọ dị, na ntụ ọzọ ka ọ na-esite na denser gaa na usoro na-adịkarị ụkọ ọ na-ehulata site na nke nkịtị. Ngwa anya njupụta bụ ihe onwunwe dị mgbagwoju anya nke na-egosipụta onwe ya na ịkwụsịlata ọkụ. Leekwa Iwu Snell
ndị e hiwere site na-ewuli elu nke ihe (sedimenti) nke sitere na mbibi anụ ahụ na nke kemịkal nke nkume ndị dị na ụwa
SG ma ọ bụ njupụta nke otu ihe bụ oke dị n'etiti ịdị arọ nke ihe na ịdị arọ nke oke mmiri dị ọcha na 4 Celsius C (oke mmiri) na nrụgide nke ikuku. SG nwere njikọ na ngwakọta kemịkal nke ihe yana yana njikọta nke atọ na atom (dị ka a pụrụ isi kwuo ya, ọ bụghị naanị na atọmịk nke ihe dị iche iche mejupụtara ya na-emetụta ya kamakwa otu esi etinye atọm ọnụ)
na hexagonal, trigonal na tetragonal crystal usoro e nwere otu optic axis (direction nke otu refraction): mineral nke ndị a na usoro a maara dị ka uniaxial (na uniaxial nkume ndị optic axis bụ ihe yiri nke isi vetikal 'c' axis)